Ozi e nyere na Medjugorje na Ọktoba 2, 2016 | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ozi enyere Medjugorje na Ọktoba 2, 2016
di Paolo Tescione - Ọktoba 2, 2016
Mọ Nsọ, sitere n’aka Nna nke bi n’elu igwe, merem nne, buru nne nke Jisos, ya na nne a.
Ya mere abia ige nti gi, imeghe aka nne m nye gi, inye gi obi m ma kpoo gi ka i noro m, nihi na Nwa m, enyefe gi n’aka m. Ọ bụ ihe nwute na ọtụtụ ụmụ m amaghị ịhụnanya nke Ọkpara m.
Ọtụtụ achọghị ịmata ya. Ma unu onwe m, ụmụ m, lee ka ndị na-aghaghị ịhụ ụzọ ma ọ bụ ghọta iji kwere. Ya mere ụmụ m, ndị ozi m, mgbe gbachie obi gị, gee ntị n’olu Ọkpara m. Ka obi gị bụrụ ebe obibi Ya, ọ bụghị ka ọ gbaa ọchịchịrị na nke nwute kama na-enye ìhè na Ọkpara nke Ọkpara m. Jiri okwukwe chọọ olile-anya, n’ihi na okwukwe bụ ndụ nke mkpụrụ obi.
A na m akpọku gị ọzọ: kpee ekpere, kpee ekpere iji nwee ike ibi ndụ okwukwe na ịdị umeala n'obi nke mmụọ ma jiri ọkụ na-enwu. Childrenmụ m, unu anwala ịghọta ihe niile ozugbo n’ihi na aghọtaghị m ihe niile ozugbo, mana ahụrụ m m n’anya ma kwere n’okwu dị iche iche nke Ọkpara m gwara m. Onye buru uzo mbu, ihe mgbaputa.
Ndi-ozi nke ihu-n'anyam, unu ndi n praykpe ekpere, ndi nāchuru onwe-unu àjà, unu ndi huru n’anya ma ghara ikpa ikpé, unu na-agbasa n’ezi. Okwu nke Ọkparam, Ozioma, nihi na ị bụ Ozi Ọma dị ndụ, ụnụ bụ ụzarị ọkụ nke Ọkpara m.
Mụ na nwa m ga-anọnyere gị, anyị ga-agba gị ume ma anyị ga-anwale gị. Mụ m, na-arịọ ngọzi mgbe niile n’aka ndị ahụ na nanị n’aka ndị Ọkpara m gọziri n’aka ya, n’aka ndị ọzụzụ atụrụ gị. Daalụ".